Home Wararka Gudaha Beesha reer Ugaas oo maanta ku shirtey Mogadishu edeymo waaweyne dusha ugga...
Shir maanta ka dhacay Hotel Giyaajo ayaa loogga hadlay dhowr qodon uggunna horeyso in leyska wareysto xaaladda Beesha dood iyo buuq ayaanna hareeyay goobta shirka uu ka dhacaayey arrimaha uggu waaweyn ee leysku qabtay ayaa kow ka aheyd arrimo lagga qurux badnaa inuu faraha lagallo Xildhibaan Mohamed Abdulqadir taas oo laggu sheegay ineey tahay mid dhabar jab ku ah beesha Reer Ugaas.
Sedax qodob ayaa laggu cannaantay Xildhibaan Mohamed Abdulqadir oo aad xasaasi u ah.
1: innuu dhibaato ku haayo Gabar aqoon yahanad ah Xildhibaan iyo wasiir ka ah Maamulka Hirshabelle lagguna magacaabo Aisha Qaliif kanna aqoon baddan dalka iyo dibadane wax ku soo baratay Master Degree-na ah xeellad iyo siyaasad ku gaartay maqaam sare.
2: innuu cidlo ugga dhaqaaqay ergaddii soo dooratay qaarkoodna lacago deymo ah laggu leeyahay lacagahaas oo laggu sheegay inneey Hotel ku deggeen illaa lix ka mid ahne lagga soo raacdeeyay hotelkii aay ka degenaayeen magaaladda Mogadishu markii dambeetane dacwadoodda gaartay odey dhaqameedyo sidaasna laggu xaliyay .
3: innuu isku dayi waay innuu raadiyo kursiga wasiirnimo ee beesha Xawaadle kanna gaabiyay Hami iyo han wax laggu raadsadane uusan laheyn .
Sida loo xaqiijiyay Radio Halgan
Dhalinyaro iyo odey dhaqameed intaba waxa aay isku afgarteen in wax wadda shaqeyn ah lalla yeellan doonin xildhibaan Mohamed Abdulqadir.
Xogtaan Radiohangan.com wuxuu ka hellay dad goobjoogayaal ka ahaa Shirka maanta ka dhacay Hotel Giyaajo ee magaaladda Mogadishu.
Previous articleDaawo: Muqaal DJFS Soomaaliya oo iclaamisay maalinta loo fariisanayo imtixaanka dugsiyada sare
Next articleDuqayn lagu dilay xubno ka mid ah Alshabaab.
xujaydii ugu horaysay ee sanadkan Xajka ugu soo safray safar dhanka...
Tarsan oo shaaciyey arrin ay ku qasban yihiin inay sameeyaan Somalia...